▷ Laptọọpụ ihuenyo TOUCH kacha mma nke 2022
Mgbe mgbasa ozi nke ngwaọrụ mkpanaka gasịrị, mpaghara PC emetụtala nke ukwuu, na ha aghaghị ịmaliteghachi onwe ha iji nye ngwọta mara mma maka ndị ọrụ ma gbalịa ịnọgide na-enwe òkè ahịa. Emere nke a site na ndozi ụfọdụ dịka laptọọpụ mgbanwe mgbanwe, 2 n'ime 1, ma ọ bụ metụ laptọọpụ, ha nwere ihe kacha mma n'ụwa abụọ: tablet + laptọọpụ. Otu ihe nwere ike ime ka ị nwekwuo ike na ụbọchị gị kwa ụbọchị ...
1 Laptọọpụ mmetụ kacha mma
2 Uru nke inwe laptọọpụ nwere ihuenyo mmetụ
3 Ụdị nwere laptọọpụ mmetụ aka
4 Ị ga-azụta laptọọpụ mmetụ aka ma ọ bụrụ na ...
5 Laptọọpụ mmetụ ahụ ọ bụ otu laptọọpụ na-agbanwe agbanwe?
6 Ihe m na-eme na kọmpụta aka
Laptọọpụ mmetụ kacha mma
Tupu ịkọwa uru na ọghọm dị na laptọọpụ mmetụ aka, anyị achịkọtala nhọrọ nke onyinye taa ka, ọ bụrụ na i meela ya nke ọma, ị nwere ike chekwaa ya na nke ọ bụla n'ime ụdị ndị a:
BMAX Y13 2 na 1 Kọmputa ...
KUU 2 in 1 Kọmputa...
Uru nke inwe laptọọpụ nwere ihuenyo mmetụ
Laptọọpụ ọhụrụ ndị nwere enyo mmetụ ewerela teknụzụ tozuru oke na egosipụtara na ngwaọrụ mkpanaka, dị ka ogwe aka ọtụtụ, iji tinye ha wee malite ime mgbanwe maka mkpa ọhụrụ. Ndị otu a nwere ọnụọgụgụ uru ndị ị kwesịrị ịma:
Size: ha na-enwekarị kọmpat akụkụ, ebe ọ bụ na ndị nwere ihuenyo mmetụ dị n'etiti 13-15 ". Nke ahụ pụtakwara nnukwu ngagharị na nnwere onwe.
Mfe / nnweta: Ọ bụrụ na ị naghị arụ ọrụ nke ọma na keyboard ma ọ bụ na ị nwere ụdị nsogbu na-egbochi gị iji keyboard / touchpad / òké na-emekarị, ihuenyo mmetụ nwere ike inyere gị aka na nke ahụ. Naanị ị ga-emetụ ebe ịchọrọ ịme ihe ahụ.
Gbachi nkịtị: ọ bụrụ na ịchọrọ ịgbachi nkịtị n'ihi na ị na-edekọ ma ọ bụ na-arụ ọrụ ụda ụfọdụ, ihuenyo mmetụ ahụ na-enye nkwụsịtụ ahụ ịchọrọ n'ihu igodo igodo.
Nnwere onwe: site n'inwe ike iji ihuenyo mmetụ ahụ, ị ​​nwere ike ịrụ ọrụ ma ọ bụ nwee obi ụtọ na laptọọpụ gị ebe ọ bụla ịchọrọ, na-enweghị mkpa tebụl ma ọ bụ elu iji kwado ya. Ị nwekwara ike iji stylus ka ịnyagharịa menus, see, na ndị ọzọ.
Calidad- Laptọọpụ nwere ihuenyo mmetụ na-agụnyekarị ihuenyo dị elu yana teknụzụ capacitive. Ha ga-emepụta ihe oyiyi doro anya na nkọwa karịa akwụkwọ ndetu ọdịnala.
Ụdị nwere laptọọpụ mmetụ aka
Enwere ọtụtụ ụdị nke akwụkwọ ndetu omenala nke nwekwara ụdị mmetụ aka. Ndị kachasị ewu ewu bụ:
mCover Hard case maka...
A hapụrụ onye nrụpụta China na ngalaba akwụkwọ ndetu nke IBM Thinkpad, otu nyiwe kachasị mma na ahịa nke ọ na-eji ugbu a dị ka ntọala. Ọ bụghị ihe ijuanya na ọ ghọrọ otu n'ime ndị na-ere ahịa kachasị ike, ebe ọ bụ na nwere otutu ụdị ebe ịhọrọ, na a dị ịrịba ama àgwà / price ruru.
Microsoft chọrọ ịsọ mpi Apple na kọmpụta mmetụ aka ya. Ndị otu ahụ Ibu Microsoft Ha nwere atụmatụ mara mma nke ukwuu, yana ntụkwasị obi dị ukwuu, arụmọrụ dị ukwuu na nnwere onwe dị mma. Ihe niile nwere Windows kacha mma.
Ụlọ ọrụ Amerịka ewepụtakwala kọmpụta mmetụ aka iji gboo mkpa dị iche iche. Ụfọdụ mgbanwe ma ọ bụ 2-in-1, ndị ọzọ nwere ihuenyo na-atụgharị 360º. Ụdị dị mma maka ụlọ na ụlọ ọrụ, na àgwà nke onye na-emepụta ihe dị ka nke a na nkà na ụzụ kachasị ọhụrụ. Ị nwere ike ileba anya na katalọgụ nke Akwụkwọ ndetu HP na njikọ dị n'elu.
Ụlọ ọrụ Taiwanese ewepụtala onwe ya dị ka onye ọzọ na-emepụta laptọọpụ kacha mma. Amaraworị ya dị ka onye nrụpụta motherboard kacha ibu, ma ugbu a, o wetakwara teknụzụ ahụ n'obi ndị otu ya, na-enye otu nyiwe kachasị mma. A na-eji ha arụ ọrụ, ịdị mma na ọnụ ahịa ezi uche dị na ya mara ha. Na njikọ na-esonụ ị nwere ike ịhụ nhọrọ nke Asus laptops kacha mma.
Ị ga-azụta laptọọpụ mmetụ aka ma ọ bụrụ na ...
Ọ bụrụ na ị kpebiela ịzụrụ kọmpụta ma ị na-ala azụ n'etiti nke a na-emekarị na a metụ laptọọpụ, ebe a ị nwere ike mechaa ịhọrọ otu ma ọ bụ nke ọzọ na-echebara ihe ndị a:
Ị chọrọ iji ya na ụdị mbadamba nkume: kọmpụta ndị na-emetụ aka nwere ihe kachasị mma nke ụwa abụọ ahụ, na-eji mma nke keyboard na touchpad maka ịpị ma ọ bụ egwuregwu, yana nnukwu ihuenyo na arụmọrụ dị elu, yana ịgbakwunye ntụgharị na mmegharị nke mbadamba ihe mmetụ. Ya mere, na otu n'ime ndị a kọmputa ị nwere ike inwe ma na otu ngwaọrụ. Mgbe ọ bụla ịchọrọ ọ ga-abụ mbadamba nkume na mgbe ịchọrọ laptọọpụ ...
Ị bụ onye nrụpụta eserese: Ọ bụrụ na ị bụ onye mmebe eserese, ị ga-enwe mmasị inwe ihuenyo mmetụ. Ọ bụ ezie na e nwere ike iji keyboard na òké rụọ ọrụ ngwanro ahụ, enwere ụfọdụ ihe kacha mma ejiri aka mee. Dịka ọmụmaatụ, iji mkpịsị dijitalụ ma ọ bụ mkpịsị aka gị, ị nwere ike iji ihuenyo dị ka kwaaji maka eserese ma ọ bụ imegharị. Dị ka a ga - asị na ị nwere mbadamba eserese ...
Ị ga-ese: Maka otu ihe ahụ dị n'elu, ọ bụrụ na-amasị gị ịbịaru ma ọ bụ nwee ụmụaka n'ụlọ, n'ezie otu n'ime ìgwè ndị a ga-amasị ndị okenye na ndị okenye, na-enye gị ohere ịbịaru ngwa ngwa na ihuenyo gị iji megharịa, chekwaa, ma ọ bụ zipu eserese.
Melite nrụpụta: ihuenyo mmetụ ahụ nwere ike inye gị ohere ịnyagharịa ngwa ngwa, dịka ị na-eme na ama ma ọ bụ mbadamba gị, ebe ọ bụ na ị gaghị eji keyboard ma ọ bụ òké na-agagharị na nhọrọ na menus. Na oge a na-enweta n'ọrụ ma ọ bụ n'ọmụmụ ihe bụ ọla edo.
Laptọọpụ mmetụ ahụ ọ bụ otu laptọọpụ na-agbanwe agbanwe?
Ụfọdụ na-eji okwu a na-agbanwe agbanwe, kọmpụta aka, 2-in-1, wdg, dị ka otu okwu. Ma ị kwesịrị ịṅa ntị mgbe ị na-ahọrọ ihe nlereanya gị, ebe ọ bụ na ha nwere obere iche:
Metụ laptọọpụ- Labelụ a na-agwa gị naanị na laptọọpụ nwere ihuenyo mmetụ, mana ọ bụghị ụdị nke ọ bụ. Iji nụchaa n'ihu, ị kwesịrị ịma echiche abụọ ndị a ...
2 na 1- Ndị a bụ laptops touchscreen nwere ahụigodo enwere ike iwepu. Nke ahụ bụ, a ga-edobe motherboard na isi sekit n'azụ ihuenyo, dị ka ọ dị na mbadamba, yabụ, ị nwere ike iwepu keyboard ahụ iji kewapụ ya wee jiri ihuenyo dị ka mbadamba, yana nnwere onwe zuru oke na keyboard. .
Na-agbanwe agbanwe: ha bụ laptọọpụ nwere ihuenyo mmetụ nwere mgbanaka na ihuenyo nwere ike ịtụgharị 360º, na-enwe ike idobe akụrụngwa dị ka a ga-asị na ọ bụ mbadamba nkume site na mpịachi keyboard azụ, ma ọ bụ dị ka laptọọpụ nkịtị. Nke ahụ bụ, maka ebumnuche bara uru ọ na-enye gị ohere iji ya na ọnọdụ mbadamba ma ọ bụ na ọnọdụ laptọọpụ, mana ị ga-enwe keyboard mgbe niile, nke ahụ na-agbakwunye ibu ma na-ebelata ngagharị ma e jiri ya tụnyere 2-in-1.
Ihe m na-eme na kọmpụta aka
Okwu siri ike maka...
Laptọọpụ aka nwere ike ịbụ a oké ọzọ maka ndị chọrọ mbadamba na laptọọpụ, ebe ọ bụ na ha ga-enwe ha abụọ na otu ngwaọrụ, na-enweghị ngwaọrụ abụọ na-eweghara ohere n'ụlọ, na-echegbu onwe ha maka ịchaji abụọ, ịwụnye ngwa kwa ụbọchị na otu ma ọ bụ nke ọzọ, wdg. Obi na-erukwa ha ala.
Na mgbakwunye, ekele maka virtualization na emulators, ị ga-enwe ike iji ngwa sistemụ arụmọrụ dịka android nakwa na laptọọpụ Windows gị, nke na-emepe ọtụtụ ohere. Ma, n'aka nke ọzọ, inwe ngwaike dị ike dị ka laptọọpụ nkịtị, ị gaghị enwe njedebe nke ezigbo mbadamba.
Ugbu a, ha nwekwara nke ha adịghị ike na ị ga-enyocha iji chọpụta ma ọ ga-akwụ gị ụgwọ ma ọ bụ na ọ gaghị:
Ihuenyo mmetụ ahụ ga-ahapụ batrị na mbụ ma e jiri ya tụnyere otu panel. Ya bụ, nnwere onwe ga-ebelata ntakịrị.
Ha nwere ike ịdị ọnụ karịa n'ọnọdụ ụfọdụ. Ọ bụ ezie na ị kwesịrị iburu n'uche na ị gaghị azụta mbadamba nkume iche iche, mana na ị na-azụta ngwaọrụ abụọ ahụ n'otu.
Ihuenyo mmetụ nwere ike isi ike ịhụ na oghere na-egbuke egbuke karịa nke a na-ahụkarị.
Laptọọpụ dị ọnụ ala » Tipo » Metụ laptọọpụ